Heshiiskii Dowlada Federaalka iyo Maamulka Jubaland ee Axmed Madoobe oo burburay+Sawiro – idalenews.com
Heshiiskii Dowlada Federaalka iyo Maamulka Jubaland ee Axmed Madoobe oo burburay+Sawiro
Heshiiskii saakeydii hore lagu wada gaarey isla markaasna qorshuhu ahaa in labada dhinac ee dowlada federaalka iyo Maamulka Jubaland ee Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe qalinka ku duugaan ayaa gebi ahaanba lagu kala tagey.
Gunaanadii shirka labada dhinac ayaa iska qabtey qodobo muhiim ah oo ay ahaayeen in magaca Jubaland meesha laga saaro oo lagu bedelo Maamulka gobolada Jubooyinka iyo Gedo iyo dowlada dhexe doorka ugu weyn ku yeelato dhismaha golaha wasiirada Maamulkaasi yeelaayo, iyo kuwa kale oo aan weli si rasmi ah loo shaacin oo labada dhinac diideen iney tanaasul ka sameeeyaan.
Ma jiraan cid tanaasul muujisey taasna waxay soo dedejisey burburka ku yimaadey in la saxiixo qodobadii shirka la soo hordhigay. Waxaa warar hoose ay sheegayaa in Madaxweynaha ka biyo diidey saxiixa qodobada qaar ka dib markii culus kaga yimid beelaha kale ee muranka kala dhaxeeyo Maamulka Jubaland.
Ma ahan markii ugu horeysey oo shirka labada dhinac uu burburey, mana jirto weli war rasmi ah oo ay labada dhinac siiyeen saxaafada.
Sawiro: Haweeney u dhalatey dalka Sweden oo rag hubeysani ku dhaawaceen agagaarka KM ee Magaalada Muqdisho
Dhageyso Salaad Cali Jeele: “Masuuliyiinta Amniga Qaranka waa dad aan shaqada loo xilsaarey aqoon u laheyn diidayna in talo ay qaataan”